व्यवासायिक सुरक्षा तथा स्वास्थ्य विषयमा सचेतना - Pradesh Today व्यवासायिक सुरक्षा तथा स्वास्थ्य विषयमा सचेतना - Pradesh Today
घोराही, २० जेठ । श्रमिक, ट्रेड युनियन तथा रोजगारदाताहरुलाई व्यवसायिक सुरक्षा तथा स्वास्थ्य विषयमा सचेतना प्रदान गर्ने थालिएको छ । सामाजिक विकास मन्त्रालय प्रदेश नं. ५ को आयोजना तथा दाङ जिल्ला उद्योग वाणिज्य संघको व्यवस्थापनमा सचेतना कार्यक्रम प्रदान गर्न थालिएको हो ।
श्रमिकहरुलाई सयम अनुसार प्रविधिका बारेमा जानकारी दिन नसक्दा दुर्घटना बढ्ने भएको यसप्रकारको कार्य सुरु गरिएको सामाजिक विकास मन्त्रालयका शाखा अधिकृत सन्तोष खनालले जानकारी दिए ।
उद्योग, व्यवसायमा हुन सक्ने दुर्घटनालाई न्यूनीकरणमा यसप्रकारको कार्यले सहयोग पु¥याउने बताए । कार्यक्रममा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका प्रदेश नं. ५ का उपाध्यक्ष हेमराज बन्जाडेले श्रम ऐन २०७४ कार्यान्वयनका लागि तीनवटै पक्षहरु मिलेर अगाडि बढ्नुपर्ने बताए ।
दाङ जिल्ला उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष नारायणप्रसाद भुसालले राज्यले कर लिने मात्र नभई सहज व्यवसाय गर्ने नीति ल्याउनु पर्ने बताए ।
गढवा उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष रविलाल आचार्यले यसप्रकारको सचेतनामूलक कार्यक्रम प्रत्येक स्थानीय तहसम्म लैजानु पर्ने बताए ।
न्युनतम पारिश्रमीक समितीका धनवहादुर वि क ले श्रम ऐन २०७४ तथा सामाजिक सुरक्षा कोषको कार्यान्वयन हुन नसकेको बताए । कार्यक्रम दुई दिनसम्म सञ्चालन हुने भएको छ ।
उद्घाटन कार्यक्रमको सहजीकरण मन्त्रालयका शाखा अधिकृत शिवहरि ज्ञवालीले गरेका थिए । कार्यक्रममा ऐनका भएका व्यवस्था, कार्यस्थलमा कसरी सुरक्षित साथ काम गर्ने ? स्वास्थ्यमा कसरी ध्यान दिने ? व्यवसायिक चुनौतीहरु,
समाधानका उपायलगायतका विषयमा छलफल गरिने भएको छ । शनिबार श्रम तथा रोजगार कार्यालय नेपालगञ्जका प्रमुख शरीशरण चौलागाई र मन्त्रालयका शाखा अधिकृत सन्तोष खनालले सहजीकरण गरेका थिए ।